MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA YORANIAN IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Yoranian iyo Sawiro
Pomeranian / Yorkshire Terrier Isku-dhaf ah Eeyo
'Yoshi oo reer Yoranian ah oo 10 bilood jira, culeyskiisu yahay 6 rodol waa eey aad u faraxsan. Wuxuu jecel yahay qof walba. Wuxuu jecel yahay in qof kasta wajigiisa la laalo. Yoshi wuu seexan karaa meel kasta iyo meel kasta oo aan fiicnayn. Markasta oo uu maqlo anaga oo guriga imaanayna marwalba wuu cayaaraa (wuxuu ku istaagayaa labada lugood wuxuuna lugaha hore ee kor uqaadayaa kor iyo hoosna wuxuu moodaa inuu samaynayo salsa) irridda agteeda.
Yoranian-ka, oo sidoo kale loo yaqaanno Yorky Pom, ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Pomeranian iyo Yorkshire Terrier . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Yoranian
Naqshadeeyaha Eeyaha Naqshadeynta Naadiga = Yoranian Terrier
Diiwaanka Caalamiga ah ee Canine Registry® = Yoranian (Porkie)
Diiwaan Geliyaha Nakhshadeeyaha = Terrier-ka Yoranian
'Holly waa isku darka Yorkie Pomeranian !! Waxaan helnay iyada 19 sano ka hor. Waa gabadheena yar !!
Baily the Pomeranian / Yorkshire Terrier mix at 1 1/2 sano jir
Yoyaaniyiinta eyda Mia Sofia iyo Piper Isabella oo 6 toddobaad jira— 'Waxaan rabay inaan idinla wadaago eeygayga! Mia Sofia (bidix) iyo Piper Isabella (midig) markay jiraan 6-toddobaad. Waxay yihiin eeyo Yoranian ah. Hooyadood waa Pom, aabahoodna waa Yorkie. Waxay leeyihiin timo jilicsan oo Pom ah iyo dabo Pom ah oo duuban. Iyagu waa eeyo yar yar oo aad u ciyaar badan sidoo kalena waa kuwo aad u jecel! '
Baxter the Yoranian (Pom / Yorkie ey hybrid) oo jira 10 bilood, miisaankiisuna yahay 10 rodol — hooyadiis waa reer Pomeranian saafi ah aabihiisna waa Yorkshire Terrier nadiif ah.
Baxter the Yoranian (Pom / Yorkie mix breed dog) oo jira 10 bilood, miisaankiisuna yahay 10 rodol — hooyadiis waa reer Pomeranian saafi ah aabihiisna waa Yorkshire Terrier nadiif ah.
Yoranian yar oo 16-jir ah - hooyadeed waa Pom aabeheedna waa Yorkie. Lahaanshaha sawirka Puppy Puppy Doppy
6-toddobaad jir ah eyda Yoranian-hooyadeed waa Pom aabeheedna waa Yorkie. Lahaanshaha sawirka Puppy Puppy Doppy
Reese 3-bilood jir Yorkshire Terrier / Pomeranian mix (Yoranian)
Minnie oo ah 9-jir Yoranian eey ah
Eeg tusaalooyin badan oo Yoraniyan ah
Sawirada Yoranian 1
buluug heeler boston terrier mix
newfoundland iyo isku dhafka sarkaal oo dahab ah
bakoorad corso eyga oo buuxa
adhijirka Australiya ee loo yaqaan 'puoodle mix puppy'